Codashop Global Series January 2021 စည်းကမ်းများ | Codashop Blog MM
Codashop Global Series January 2021 စည်းကမ်းများ
၃.Final ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် – ၃၁.၁.၂၀၂၁
၄.ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်အသင်းအားလုံးသည် ပွဲတစ်ခုချင်းစီးမှာ ၃ ခါထပ်ပိုပြီးတော့ Pause လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။ Pause လုပ်သည့်အချိန်မှာလည်း ၂ မိနစ်ထက်ပို၍ ကျော်လွန်၍မရပါ။
Semi Final – Best of 1
Final – BO3
Maximun Slots : 128
၆.ပြိုင်ပွဲသို့ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ ပွဲမစခင် (၁)နာရီအလိုမှာကြိုပြီးတော့ check in ဝင်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲအတွင်းသို့ ၁၀မိနစ်နောက်ကျပြီးမှဝင်ရောက်လို့မရပါဘူး။
၇. Codashop Global Sereies ကိုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ပိုင် စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သာ ယှဉ်ပြိုင်ရပါမယ်။ Tablet အသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လို့မရပါဘူး။
၈.Third Party အသုံးပြုထားတဲ့ software များဟာ ဂိမ်းတွင်းအခြေအနေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာကြောင့် ဥပမာ- ( ဂိမ်းမျက်နှာပြင် ၊ အမြန်နှုန်း ၊ SFX၊ Crosshair) စတာတွေကို အသုံးပြုချင်းကို
တားမြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတွင်းဝင်ပြိုင်သူ ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအချက်များထဲမှ တစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါကလည်း ဆုပေးအပ်ခြင်း
မပြုသည့်အပြင် ပွဲအတွင်မှ Banned မှာဖြစ်ပါတယ်။
၉.ပွဲအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းသည် ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုသာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀.အကယ်၍ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူသည် system error တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် Admin ဒါမှမဟုတ် Channel moderator ကို (၃) မိနစ်အတွင်းအမြန်အကြောင်းကြားပေးရပါတယ်။
၁၁. အသင်းနာမည်နဲ့ ကစားသမားနာမည်ဟာ ညစ်ညမ်းသော အသုံးအနှုန်းများနှင့်ပေးထားတာ မဖြစ်စေရပါဘူး။
၁၂. ဂိမ်းတစ်ပွဲဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်ကစားရမည်ဆိုလျင် ပြန်လည်ကစားရမည့်အကြောင်းအရင်းမှာ
(ဃ)ဂိမ်း setting မှားယွင်းနေခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃.Bug တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ပွဲ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်အသင်းသားအပေါ် တစ်ခုခုအသာရခြင်းဟာ ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။
၁၄. ပြိုင်ပွဲကို Register လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို နဲ့ တစ်ခြားသောပွဲအတွင်းမှာ record လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို “Codashop” ရဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ကူးယူဖော်ပြခွင့်ရှိပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေး
– ပြိုင်ပွဲအတွင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားပါက ပြိုင်ပွဲစီစဉ် ကျင်းပသူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါတယ်။
– ဆုံးဖြတ်ချက် အကျုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများမှာ ( ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် စနစ် ၊ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ ၊ အနိုင်ရရှိသူရွေးချယ်သည့်စနစ်များ)
တစ်ဖက် ငါးယောက်စီယှဉ်ပြိုင်ကစားရတဲ့ Mobile Legends မှာ အနိုင်ရရှိသူကိုအောက်ပါစည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ရန်သူရဲ့ တာဝါကို အပြီးသတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း။
(၂) ပြိုင်ဖက်အသင်းမှ အရှုံးပေးသွားခြင်း
(၃) ပြိုင်ဖက်အသင်းမှ ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက်အဆင့်မမှီခြင်းနှင့်
(၄) ပြိုင်ဖက်အသင်းမှ ဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များအတိုင်းမလိုက်နာခြင်း
(၅) ဖော်ပြထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်များဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ပြိုင်ပွဲစီစည်သူ “Codashop” ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ပြုသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁.၁.၂ ( ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း )
ပြိုင်ပွဲများတွင်ကျင့်သုံးသောထုံးစံအရ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်ပွဲတွင် ၃ ပွဲတိတိယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ၃ ပွဲလုံးတွင် အသင်းတစ်သင်းတည်းက ၂ ကြိမ်တိတိအနိုင်ရပါက ထိုအသင်းကို ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသူအဖြစ်
Final မဟုတ်တဲ့ ပွဲစဉ်များအားလုံးကို Best of 1 ပုံစံဖြင့်သာ သတ်မှတ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Final ကိုရောက်မှသာ Best of3ပုံစံဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
– ကစားပွဲ အစီအစဉ် နှင့်
Codashop အနေနဲ့ ပွဲစဉ်အပြောင်းအလဲများကို မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မဆို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ ပွဲစဉ်ပြောင်းလဲသည့်အခါ Codashop မှ ဝင်ပြိုင်မည့်အသင်းအားလုံးကို အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– Early Check in ( ပြိုင်ပွဲသွင်းသို့ စောစီးစွာဝင်ရောက်ခြင်း)
ပြိုင်ပွဲတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အသင်းများအနေနဲ့ မိမိအသုံးပြုသည့် Game Version ကို Codashop ကသတ်မှတ်ထားသည့် Game Version ကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Mobile Legends ရဲ့
နောက်ဆုံးထုတ်ထားသည့် ဂိမ်း Version ကိုသာပွဲအတွင်းမှာအသုံးပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ Heroes အသစ်ကိုင်မည့် သူများနှင်း အသင်း ၂ သင်းအကြားမျှချေကျအောင် ဖြစ်သည်။
ကစားသမားတွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက် Lobby ထဲဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်ထွက်ခွာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပွဲစီစဉ်သူ Codashop ရဲ့ Admin ကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးတော့မှသာ ထွက်ခွာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားပွဲမစခင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါ ပြီးထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့
– Emblem တွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့
– ဂိမ်း settings တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ကစားသမားတွေဟာ မည်သည့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမဆိုဖြစ်ပါ်ပါက ပွဲမစခင်အချိန်တွင်းမှာကြိုတင်ပြီးဖြေရှင်းထားဖို့လိုပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဟာ စီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Codashop Admin ဘက်မှအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ပွဲချိန်နောက်ကျခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်ကစားသမားကိုမှပွဲချိန်နောက်ကျခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်၏ အမှားကြောင့်နောက်ကျခြင်း ၊
ကြန့်ကြာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက Codashop အနေဖြင့်၎င်းကစားသမားပါဝင်သော အသင်းကိုထိရောက်သော အပြစ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကစားသမားအားလုံးသည် in-game settings များကိုမိမိနှစ်သက်သလိုပြောင်းလဲပြီးပါက ထိုသို့ပြောင်းလဲပြီးကြောင်းကို Admin ထံသို့အကြောင်းကြားပေးရပါမယ်။
– In-game Lobby
အပေါ်ပိုင်း Bracket မှာရှိသော အသင်းများသည် in-game lobby ကိုcreate လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bracket အပေါ်မှာရှိတဲ့ အပေါ်အသင်းဟာ အလိုအလျောက် အပြာရောင်အသင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အောက်ဘက်က အသင်းကတော့
၁- ရွေးချယ်ခြင်း/ဖယ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
့ွနှစ်ဖက်အသင်းသားအားလုံးဟာ ဘယ် Hero ကိုရွေးချယ်မလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ဟာကို Ban မလည်းဆိုတာကို in-game lobby ထဲကိုဝင်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်အသင်းလုံးဟာ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်
ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Admin ကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ပွဲကိုစတင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(က) မြေပုံ : ပြိုင်ပွဲကစားသည့်ပုံစံမှာ တစ်ဖက်အသင်းသားငါးယောက်စီယှဉ်ပြိုင်ကစားရသည့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) Fame type : Draft Pick
၂.၃ – Hero များရွေးချယ်ခြင်း ဖယ်ထုတ်ခြင်း ကိုအဓိကထားပြီး အရင်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
၂.၃.၁ – ဂိမ်းတွင်း စည်းကမ်းများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များ
ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်၏ စမတ်ဖုန်းအတွင်းမှာ Bug ရှိသည် ဒါမှမဟုတ်တစ်ခြားသောပွဲကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေသည့်တရားမဝင်သော Third Party Tools များအသုံးပြုပြီးဆော့ကစားသည်ကိုတွေ့ရှိပါက
ပုံမှန်ကစားပွဲရာသီတွေမှာဆိုရင်တော့ ဘယ်သူ့ကိုအရင်ဦးစားပေးရမလည်းဆိုတာကိုအကြွေစေ့သုံးပြိးဆုံးဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် PLAYOFF ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Rank အမြင့်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့ကိုပထမဦးစားပေး
အနေနဲ့ Hero ရွေးချယ်စေတာဖြစ်ပြီး ၎င်းအသင်းပြီးမှသာ နောက်တစ်သင်းကရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– Hero ရွေးချယ်ခြင်း / Ban ခြင်းစတာတို့ကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ in gaem ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
– တစ်ကယ်လို့အသင်းအနေနဲ့ Banned ထားတဲ့ Hero ကိုမှားယွင်းပြီးရွေးချယ်မိတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီကစားပွဲကိုဆက်လက်ပြီးကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီးရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
၂.၃.၅ Heroes များလဲလှယ်ခြင်း
အသင်းအဖွဲ့ထဲမှ အသင်းသားများသည် Hero ရွေးချယ်သည့်အခါမှားယွင်းပြီးရွေးချယ်မိခြင်း ဒါမှမဟုတ် banned ထားသော Hero များအားရွေးချယ်မိပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်မရှိပါ။ကစားပွဲကစားနေစဉ်အတွင်း
မှာလည်း ထိုသို့ပြန်လည် လဲလှယ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါဘူး။
၂.၃.၆ ဂိမ်း / ရွေး / ပိတ်ပင်ပြီးနောက်အဆင့်စတင်သည်
ဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်မှအခြားညွှန်ကြားချက်များမရှိပါကဂိမ်းသည်ရွေး / ပိတ်ခြင်းအဆင့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းစတင်လိမ့်မည်။ Codashop အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်မသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုဂိမ်းဇုန်မှဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ ကစားသမားသည်ရွေးခြယ်ခြင်း / ပိတ်ပင်ခြင်းအဆင့်ပြီးဆုံးသည်နှင့်ဂိမ်းစတင်သည်အထိအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှထွက်ခွာခွင့်မပြုပါ။
ဂိမ်းစတင်သည့်အခါ Bug၊ ဒါမှမဟုတ် Connection error များကြောင့် ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်သည်းဂိမ်းပွဲစဉ်အစအတွင်း ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အခါ နှစ်ဖက်အသင်းသားများအားလုံးသည်
၂.၄ – In Game
ဂိမ်းကစားနေစဉ်ကစားသမားများအား FPS၊ ဂိမ်းသံ၊ အသံစကားပြောအသံ၊ ကွန်ယက်ဆက်တင်များ (အမြန်နှုန်း) နှင့်အခြားချိန်ညှိချက်များကိုပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါ။ လိုအပ်ချက်ရှိပါကဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်များအားတစ်ပြိုင်တည်းအကြောင်းကြားပါ။
ကစားသမားတစ်ယောက်ဒါမှဟုတ် တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ဂိမ်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း
၃.၁.၂ ဆက်သွယ်မှုကို ရည်ရွယ်၍ ဖြတ်တောက်ခြင်း
ကစားသမား၏အပြုအမူသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်ကြောင့်ကစားသမားတစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်မကကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်း
(ဥပမာ – ဂိမ်းမှထွက်ခြင်း) မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေအဆက်ဖြတ်ရန် ဦး ဆောင်သည့်ကစားသမားများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတမင်ရည်ရွယ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။
၃.၁.၃ Server Down နေခြင်း
ဂိမ်း ဆာဗာ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
၃.၂ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်လ်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်ခေတ္တနားချိန်တွင်တမင်တကာပြတ်တောက်သွားပါကဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်လ်သည်ကစားသမားနှင့်အသင်းအတွက်ဂိမ်းကိုခေတ္တရပ်နားရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒိုင်လူကြီးသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ဂိမ်းခဏရပ်နားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကစားသမားသည်ဒိုင်လူကြီးအားအောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတစ်ခုတည်းမှသာလျှင်ခေတ္တရပ်နားရန်အကြောင်းကြားနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်ခေတ္တရပ်နားပြီးနောက်ဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ခံနိုင်သောအကြောင်းများမှာ
(က) မတော်တဆ အင်တာနက်လိုင်းပြတ်တောက်သွားခြင်း
(ခ) ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမှား (ဥပမာစက်ကိရိယာချွတ်ယွင်းမှုသို့မဟုတ်ဂိမ်းသုံးစွဲသူပြhighနာ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားခြင်း။ ဂိမ်းဒိုင်လူကြီး / မာရှယ်ကြီးများကကွန်ယက်၏ကြာမြင့်ချိန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအတည်ပြုနိုင်မှသာရပ်တန့်ခြင်းကိုတရားဝင်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ )
(ဂ) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်ခြင်း (ဥပမာပျက်စီးနေသောစားပွဲနှင့်ကုလားထိုင်၊ ပရိတ်သတ်များမှအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း)
(ဃ) ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဖျားနာခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်၍မရနိုင်ပါက Codashop Admin ကိုအကြောင်းကြားပြီးပွဲစဉ်ကိုရပ်နားရန်တောင်းဆိုရမည်။Admin မှကစားသမား၏
အခြေအနေနှင့် ၎င်း၏ ပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ဆော့ကစားလိုစိတ်ရှိမရှိနှင့် ပွဲစဉ်ကိုယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပြုနိုင်လောက်သည့် ကျန်းမာရေးရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပွဲစဉ်ခဏရပ်နားမည်ဆိုပါက အချိန်
ဘယ်လောက်ကြာမည်ကို ဒိုင်လူကြီးမှဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ ကစားသမားမှ ထိုပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ဟု ဒိုင်လူကြီးမှယူဆပါက အသင်းအား ရှုံးနိမ့်သည်ဟုသတ်မှတ်
ကစားသမားအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်နှစ်သင်းလုံးမှအသင်းခေါင်းဆောင်များသည် ပွဲစီစဉ်သူ Admin များကိုအကြောင်းကြားပြီးဂိမ်းကိုပြန်လည်ကစားနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဒိုင်လူကြီးထံမှခဏတာရပ်နားရန်တောင်းဆိုလျှင်၎င်းအပြုအမူသည်တရားမ ၀ င်ဟုယူဆသည်။
Codashop Admin သည်ကစားသမားနှင့်အသင်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(က) ဂိမ်းစတင်ပြီး ၃ မိနစ်အတွင်း (၃ မိနစ် (သို့) ထိုထက်နည်း။ ) မူရင်းတားမြစ်ချက်များနှင့်ရွေးခြယ်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဂိမ်းကိုပြန်လည်စတင်ပါ။
(ခ) ၃ မိနစ်ကျော်လွန်ပါကဒိုင်လူကြီးသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီနှစ်ဖက်စလုံးမှထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းခံလိမ့်မည်။
(ဂ) အကယ်၍ အသင်းနှစ်ခုလုံးကဂိမ်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်သဘောတူပါက Ranking ပိုမြင့်သည့်အသင်းဘက်ဘက်မှဤဂိမ်းအတွက်မူလ BP ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် (သို့)
(ဃ) အကယ်၍ အသင်းနှစ်ခုလုံးကဂိမ်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်သဘောမတူပါက၊ နှစ် ဦး စလုံးသည်လက်ရှိဂိမ်းနှင့်သင့်တော်သည်ဟ
ုယူမှတ်လျှင်၊ ဂိမ်းကိုလက်ရှိအခြေအနေများအောက်တွင်ဆက်လက်ထားရှိမည်။ ဤဂိမ်းတွင်network ပြဿနာများကြောင့်ခေတ္တရပ်နားခြင်းကိုဂိမ်းကုန်ဆုံးချိန်အထိလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
(င) အကယ်၍ ခေတ္တနားခြင်းသည်ကြာလွန်းပါက Admin များသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများစွာကိုကြေငြာလိမ့်မ
ည်။ နောက်ဆက်တွဲနှောင့်နှေးမှုမရှိစေရန်ဤအခြေအနေများအရ ပွဲကိုဆက်လက်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
(စ) အကယ်၍ network ပြဿနာများသို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲအမှားများကဲ့သို့သော အခြေအနေများရှိနေသေးပါက ( ဥပမာ – ဆာဗာပျက်သွားခြင်းမှလွဲ၍) ISP ပြသနာများပါ ဖြစ်လျင် ပွဲစီစဉ်သူများမှ ဖြစ်ပေါ်
(ဆ) အသင်းအဖွဲ့ အားလုံးသည် ပွဲစီစဉ်သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေစဉ်အတွင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဇ) ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားပါက ပြန်လည်ပြီးစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
၃.၂.၆ ပွဲကိုခဏတာ Pause လုပ်ထားသည့်အခါ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ
(က) အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ပွဲကိုခေတ္တရပ်နားလိုက်ရသောအချိန်သည် ၅ မိနစ်ထက်ပိုပါက ကစားသမားအချင်းချင်းဆက်သွယ်၍ စကားပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
(ခ) ခဏနားချိန်သည် ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုမိုပါက တစ်သင်းလုံးသည် အညောင်းအညာဖြေရန်အတွက် ခဏတာသွားခွင့်ရှိသည်။ အထက်ပါ အခြေအနေများအားလုံးသည် ပွဲစီစဉ်သူ Admin များထံမှ ခွင့်ပြုချက်အရင်
တောင်းရမှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှလုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအချိန်ကာလအတွင်းကစားသမားများသည် တစ်ခြားသောလူများနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းမပြုရပါ။
ဂိမ်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက် အခြေအနေများကိုပွဲစီစဉ်သူ Codashop မှဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ –
– ပွဲကစားစဉ်အချိန်အတွင်း ဂိမ်းအတွင်းမှာ Bug ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပွဲစဉ်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်ဟု ယူဆလျင် (ဒါမှမဟုတ်)တစ်ခြားသောပြင်ပအကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့်
ဂိမ်းကစားခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုယူဆလျင် ထိုကစားပွဲကိုအစကနေပြန်လည်ကစားခွင့်ရှိသည်။
နှစ်ဖက်အသင်းမှကစားသမားများသည် ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းမပြောကြားသေးတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ဖက်အသင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ အသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတိုင်းရဲ့
Game setting ကိုပြီးဆုံးအောင်ပြောင်းလဲပြီးပြီလားဆိုတာကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင်များအနေနှင့်ပွဲမစခင်မှာ ကစားပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်
တွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အသင်းသားတွေကိုသတိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Setting မှားယွင်းပြုလုပ်ထားခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကြောင်း ပွဲကိုဆက်လက်မကစားနိုင်ပါက Admin အနေနဲ့ နှစ်ဖက်အသင်းရဲ့ ပြောဆိုမှုများအပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
၂ သင်းလုံးမှ ပွဲကိုနောက်တစ်ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ သဘောတူညီခြင်းမရှိပါက Codashop အနေဖြင့် ပိုမို၍ Ranking ကောင်းသောအသင်းအပေါ်ကိုသာရွေးချယ်ပြီး အနိုင်ရသူကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Codashop အနေဖြင့် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရှိပါသည်။
ပွဲစဉ်အကဲဖြတ်ရာတွင်သတ်မှတ်ချက်များ : အသင်းရဲ့ စုစုပေါင်း net worth ကွာခြားမှုသည် စုစုပေါင်းကစားပွဲရဲ့ မိနစ် ၈၀၀ ထက်ပိုရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ ဂိမ်းအတွင်းဝင်ချိန် မိနစ်နှစ်ဆယ် ရှိတယ်ဆိုကြပါတယ်။ အဖွဲ့ (၁) သည် 20,000 net worth ရှိပြီး အဖွဲ့ (၂) သည် 38,000 ရှိပါက ကွာခြားချက်မှာ 18,000 ဖြစ်သည်။ 800 x 20 minutes = 16000 ရှိသည်။ ဒီတော့ အဖွဲ့ (၂) သည် 16,000 ထက်ပိုမိုကြာမြင့်တာကြောင့် အဖွဲ့(၂) ကိုအနိုင်ရသူအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃.၅.၁ ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူမှ ဂိမ်းပွဲရလဒ်ကို အတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ပါလိမ့်မယ်
၃.၅.၂ နည်းပညာနဲ့ဆိုင်သော ပြဿနာများမှတ်တမ်း
– ကစားသမားများအနေနှင့် နည်းပညာအခက်အခဲများကြုံတွေ့လာပါက ပွဲစီစဉ်သူတွေကိုအကြောင်းကြားပေး၇မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းတစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါက အနိုင်ရရှိသူသည် အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ BO1 သည် ၁-ဝ၊ BO3 သည် ၂-၀ ဖြစ်သည်) ။ အကယ်၍ အနိုင်ရရှိခြင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်လျှင်၊ အခြားဒေတာများကိုမှတ်တမ်းမထားပါ။
ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြိုင်ပွဲရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ အနိုင်ရရှိသူကို ချက်ခြင်းအဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ကစားသည့်အသင်းသားများမှာလည်း ပွဲအဆုံးအဖြတ်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပြီး
” ပြိုင်ပွဲရလဒ်အတည်ပြုချက်မှတ်တမ်း” ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါအပြုအမူကိုမျှတမှုမရှိသောကစားနည်းဟုသတ်မှတ်ပြီး Codashop ကသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပင်နယ်တီတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ကစားပွဲပြင်ဆင်ခြင်း အဓိပ္ပာယ်မှာ ကစားသမား ၂ ယောက်ထက်ပိုမိုပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဖက်အသင်းနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်
အသင်းအားလုံးသည်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းကောင်းမွန်သောအားကစားဖြစ်မှုကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာသင့်သည်။ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ကစားရမည်ဖြစ်ပြီး မျှမျှတတ
Hacking ဆိုသည်မှာ “MLBB” ကစားသူများ အားဂိမ်းကို hack ပြီးမကစားဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားပါသည်။
(ဃ) Bug ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း
တစ်ဖက်အသင်းအပေါ် မတရားသောနည်းလမ်းဖြင့်အနိုင်ရရှိရန်အတွက် Bug အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။ ဒီအတွက် ဥပမာတွေကတော့
ပစ္စည်းကိရိယာများ ၀ ယ်သည့်အခါ bug များ၊ကြားနေတွားတတ်သောသတ္တဝါများ၊ သူရဲကောင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိအမှားများသို့မဟုတ် Codashop Admin
ကစားပွဲအနိုင်ရရှိဖို့အတွက် တရားမဝင်သော Electronic Device များ နှင့် Programme များ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားသောနည်းလမ်းများပြုလုပ်ခြင်းကိုတားမြစ်ထားပါသည်။
(ဆ) ယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အတွင်းတမင် အဆက်ဖြတ်ဖြင်း
ကစားနေစဉ်အတွင်းခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် သို့မဟုတ် ပွဲစီစဉ်သူကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ကစားပွဲမှထွက်သွားခြင်း
Codashop မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းပြုလုပ်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်သည်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟုတ်သတ်မှတ်သည်။
ယှဉ်ပြိုင်ကစားသည့်အချိန်အတွင်းတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရန်ဖြစ်ခြင်း ၊ စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်း ၊ နှိမ့်ချပြောဆိုခြင်း ၊ ဆဲဆိုခြင်း ၊ ညစ်ညစမ်းသောအသုံးအနှုန်းများ ပြောဆိုခြင်းမပြုရ။ ထိုကဲ့သို့
သောအပြုအမူများပြုလုပ်ပါက Coashop Admin မှထိရောက်သောအရေးယူခြင်းများ ပြုလုပပ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
၄.၁.၂ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ရိုင်းစိုင်းသောအပြုအမူများ
ကစားသမားအားစဉ်းစားနိုင်သည့်မည်သည့်နည်းနှင့်အပြုအမူ (ပြုမူမှုသို့မဟုတ်အမူအရာ) ကိုပြုခွင့်မပြုပါ
အခြားအသင်းများ၊ ပရိသတ်များသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲဝင်အရာရှိများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ရိုင်းစိုင်းစေသည်။ အခြားသူများကိုလည်းအလားတူပြုရန်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း
လုပ်ဆောင်ချက်ဥပမာ လှောင်ပြောင်ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရန်လိုသောအပြုအမူများကိုလည်းခွင့်မပြုပါ။
အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များသို့မဟုတ်ပရိသတ်ကိုစော်ကားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လိမ့်မည်။ စော်ကားမှုအပြုအမူများပါဝင်သည်ဒါပေမယ့်လည်းကန့်သတ်မထား: အကြောင်းပြချက်နှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအခြားကစားသမားရဲ့စက်ပစ္စည်း, ကိုယ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုထိ။ အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးနှင့် guests ည့်သည်များ (ရှိလျှင်) သည်အချိန်တိုင်းတွင်ယဉ်ကျေးစွာပြုမူသင့်သည်။
အဖွဲ့ ဝင်များအားလုံးသည် တစ်ခြားသော အသံလွှင့်စေနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ Codasop မှချမှတ်ထားသည့်တရားဝင်စည်းကမ်းများကိုသာ
ကစားသမားများနှင့်နည်းပြများအပါအ ၀ င်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသင်းအဖွဲ့ထဲမှ တစ်ဦးဦးသည် မူးယစ်စေသော ဆေးဝါးများသုံးစွဲ
၄.၁.၆ ကစားသမားများသည် မျက်နှာများကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။ မိမိဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကို ပွဲစီစဉ်သူအားပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ပွဲစီစဉ်သူ Admin များအနေနှင့် ကစားသမားအားလုံး
ကိုသိရှိခွင့်ရှိပြီး ကစားသမားတွေရဲ့ မျက်နှာကို ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အရာမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။live လွှင့်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းကိုခွင့်မပြုပါဘူး။
၄.၂ ပရိုဖက်ရှင်နယ် မကျတဲ့အကြောင်းအရာများ
အတိအလင်းဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက Admin များအနေဖြင့် ထိုအသင်းအဖွဲ့ကို အပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက် : စည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းသည်လည်းအပြစ်ပေးခံရနိုင်ပါသည်။
ကစားသမားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်စော်ကားနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုတားမြတ်သည်။
ကစားသမားများသည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အသရေဖျက်ခြင်း ၊ ညစ်ညမ်းစွာဆဲဆိုခြင်း ၊ အသားအရောင်ခွဲခြားခြင်း ၊ ပွဲကစားနေစဉ်အတွင်း ညစ်ညမ်းခွေများအကြောင်းပြောဆိုခြင်း ၊ နိုငငံရေးအကြောင်းပြောဆိုခြင်း
အသင်း ၀ င်အားလုံးသည်အသင်း ၀ င်အားလုံးသည်သဘောသဘာဝအရဆိုးရွားပြီး Codashop ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောမည်သည့်ကြေညာချက်ကိုမျှမထုတ်ပြန်ရပါ။ Codashop သည်အပျက်သဘောဆောင်သောပြောဆိုမှုဟုယူဆနိုင်သည့်အရာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၂.၅ ပြိုင်ပွဲအတွင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ပွဲစီစဉ်သူများမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း
အသင်း ၀ င်တစ် ဦး သည်စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုယူဆပြီး Codashop ထံမှပြစ်ဒဏ်ကိုလက်ခံရရှိပါကအသင်းတစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောနောက်ထပ်ပြစ်ဒဏ်များပေးရန်လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
၄.၂.၆ ကစားသမားရဲ့အမူအကျင့်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း
အကယ်၍ Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ (သို့) အဖွဲ့ ၀ င်သည် Mobile Legends: Bang Bang ၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိပါက Codashop သည်တစ် ဦး တည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြစ်ဒဏ်လိုအပ်မှုနှင့်အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Codashop အဒ်မင်သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ကစားသမားတစ် ဦး ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုလျှင်၎င်းကစားသမား / အသင်း ၀ င်သည်အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလှည့်စားခြင်း / နှောင့်ယှက်ခြင်းခံရကြောင်းတွေ့ရှိပါကထိုအဖွဲ့ဝင်များသည်ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်။
အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးသည်ဂိမ်းစည်းကမ်းအတိုင်းသာ ဆော့ကစားခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အသင်း ၀ င်အားလုံးသည်စဉ်းစားရမည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွင်မဆိုပါဝင်ရမည်။အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊
ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးပုံစံမှမဆို Codashop စီမံအုပ်ချုပ်သူနှင့်၎င်း၏တွဲဖက်များမှပေးသောလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်းကြပ်စွာလျှို့ဝှက်ထားပြီးလျှို့ဝှက်ထားသည်။ အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
Codashop Global Series နှင့်ဆက်စပ်တော့ Admin အပါအဝင်တစ်ခြားသော တာဝန်ရှိသူများသည်ကစားသမားများနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာပတ်သတ်မှုများမရှိစေရပါ။
Codashop Global Series မှတာဝန်ရှိသူများသည် ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းသားများထံမှ လက်ဆောင်များပေးခဲ့ပါက လက်ခံခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်သည်။
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့်ကစားသမားများသည်လည်း တာဝန်ရှိသူများအား အနိုင်ရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ လက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းမပြုရ ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်သည်များကို သိရှိပါက အပြစ်ပေးစနစ်ကို Codashop Admin များမှဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးသည်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားတားမြစ်ထားသောနည်းဗျူဟာများ၊ နည်းစနစ်များဖြင့်ကစားခြင်းကိုသဘောတူခြင်း၊ သဘောတူခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း (သို့) ဂိမ်းကိုလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမပြုရ။ မည်သည့်ပွဲစဉ်ကိုမဆိုပြင်ဆင်သည်
Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးတစ်လျှောက်တွင် Codashop စီမံအုပ်ချုပ်သူသည်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပစ္စည်းအချို့ကိုအဖွဲ့အားအဖွဲ့သို့တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အကယ်၍ စာရွက်စာတမ်းသည် Codashop Global Series မှသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါကအဖွဲ့သည်ပင်နယ်တီထိမှာဖြစ်ပါသည်။
Coashop Global Series ပြူလုပ်သော အဖွဲ့များအားလုံးသည် ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သတ်ပြီးလောင်းကစားခြင်းမပြုလုပ်ရ။
မည်သည်အသင်းမဆို သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းများ ချိုးဖောက်ပါက အောက်ပါ အတိုင်းပထမအဆင့်အနေဖြင့် အပြစ်ပေးခံရမည်ဖြစ်သည်။
၄.၄.၂ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်များတွင် Hero ရွေးသည့်အခါ ပထမဆုံးရွေးချယ်နိုင်ခွင့်မရှိခြင်း
၄.၄.၃ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်များတွင်ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုပိတ်ပင်ခြင်း
၄.၄.၄ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့်အသင်းများအား ဆုကြေးငွေပေးအပ်မှုမရှိခြင်း
၄.၄.၅ ဂိမ်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရခြင်း
၄.၄.၆ Codashop Global Series တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့်မှီခြင်း
စည်းမျဉ်းများကိုထပ်တလဲလဲ ချိုးဖောက်ပါက ပိုမိုပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်ကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည်ပွဲသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှုကိုမသက်ရောက်သောအခြေအနေတွင် Codashop အဒ်မင်သည်အသင်းကစားသမားများထံမှအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ရောက်ရန်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Codashop ဖြစ်ရပ်များ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများ၊ လူတွေ့မေးမြန်းခန်းများ၊
မည်သည့်ကစားသမားကိုမဆိုပြစ်ဒဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာချက်ထုတ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဖွဲ့ / ကစားသမားသည် Codashop Global Series ၏စည်းရုံးရေးမှူးများကိုဥပဒေအရအရေးယူရန်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုပယ်ဖျက်သည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။
၅။ Player Device နှင့် Equipment
၅.၁.၁ လက်ကိုင်ကိရိယာ (အရန်သိမ်းဆည်းမှုပါဝင်သည်)
၅.၁.၂ နားကြပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်နားကြပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဖုန်းများ
ကစားသမားများသည် Codashop မှထောက်ပံ့ပေးထားသောနားကြပ်များကိုသာလျှင်ဆက်သွယ်မှုစနစ် (သို့) သတ်မှတ်ထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ဂိမ်းတွင်အသံစကားဝှက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ chat အကြောင်းအရာအားစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိကို Codashop ကဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ကစားသမားမဟုတ်သောအသင်း ၀ င်များအတွက်လျှောက်လွှာကိုအနည်းဆုံး ၄၈ နာရီအတွင်းပြုလုပ်သင့်သည်
ပွဲစဉ်မှ Codashop အဒ်မင်အထိကြိုတင်မဲပေးသည်။ အဓိကနည်းပြ၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ၊ အသင်းမန်နေဂျာနှင့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသာအသင်းနှင့်အတူကစားခွင့်ရသည်အထိခွင့်ပြုသည်။ အသင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရှုရန်နေရာကို ၀ င်ရန်လက်မှတ်များကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
၆.၂ အသင်းများ၏ ပရိသတ်များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများကိုအားပေးသောပရိတ်သတ်များကို ဆဲဆိုခြင်းမပြုစေရန်နှင့် တစ်ခြားသောပြိုင်ဖက်အသင်းများအား ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုရှိအောင်စနောက်ခြင်းများကိုတားမြစ်ပါသည်။
Codashop Global Series၊ Codashop Global Series နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အညွန့်များနှင့်အခြား Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးနှင့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်များကိုအသင်းများသည်အချိန်တိကျသင့်သည်။ နောက်ကျသောကြောင့်အဖွဲ့သည်တာဝန်ရှိသည်။
၇.၁ ။ အဖွဲ့လိုအပ်ချက်
၇.၁.၁ အသင်းများတွင်အဓိကနည်းပြတစ် ဦး၊ မန်နေဂျာ (GM) နှင့်အစားထိုးကစားသမားရှိရန်အကြံပြုသည်။ အမြဲတမ်းကစားသမား (၅) ယောက်ရှိသင့်သည်။ အစကစားသမားများနှင့်အစားထိုးကစားသမားများကိုတရားဝင်အသင်းစာရင်းတွင်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်။ ပါဝင်မှုမှမပြည့်စုံသောစာရင်းရှိသည့်မည်သည့်အသင်းကိုမဆို Codashop ကငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တရားဝင်အသင်းစာရင်းတွင်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကစားသမား (၆) ဦး (ကစားသမား ၅ ဦး နှင့်အစားထိုး (၁) ဦး ပါ ၀ င်နိုင်သည်
ဒေသခံကစားသမားအရေအတွက်သည်အသင်းတွင် ၆၀% ထက်မနည်းစေရ။ အားလုံးကစားသမားရပါမည်
အသင်းရဲ့မူလတိုင်းပြည် / inရိယာ၌နေထိုင်ကြသည်။ ခြွင်းချက်မရှိပါ။ မမြင်နိုင်တဲ့၏ကိစ္စများတွင်
ကစားသမားတစ် ဦး အားစာချုပ်တစ်ခုမှမကျေပွန်နိုင်သည့်အခြေအနေများရှိပါကပြန်လည်တောင်းခံရန် Codashop အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံတောင်းဆိုမှုကိုတင်ရမည်။ ကစားသမားစာရင်းကိုအပြောင်းအလဲလုပ်သည့်ကာလအတွင်းသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးကစားသမားများသည်အသင်းတစ်ခုတည်းအတွက်သာယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုသည်။
၇.၁.၃ ကစားသမားစာရင်းကို Codashop Global Series ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြလိမ့်မည်။ အသင်းများသည်၎င်းတို့စာရင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တင်သွင်းပြီးသည်နှင့်အသစ်ပြောင်းမည်။ ကစားသမားသည်သူတို့၏စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည်နှင့်အပြောင်းအလဲစာရင်းအပြောင်းအလဲများကို Codashop ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်။ ဒီကစားသမားစာရင်းမှာပါလိမ့်မည်
နောက်ဆုံးပေါ်ကစားသမားစာရင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကာလအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်စာရင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ စာရင်းကို Codashop မှအတည်ပြုသည်။
၇.၂ ။ ကစားသမားစာရင်းတင်သွင်းခြင်း
စတင်ကစားသမား ၅ ယောက်နှင့်အစားထိုးကစားသမားအပါအ ၀ င် Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီး။ ကစားသမားစာရင်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး Codashop Global Series မှသတ်မှတ်သည့်နောက်ဆုံးရက်နောက်တွင် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။
၇.၂.၂ နောက်ကျသောတင်ပြမှုဖြစ်ပေါ်ပါက Codashop Global Series သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကစားသမား၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုရှိမရှိကို အခြေခံ၍ လျှောက်လွှာအားအတည်ပြုခွင့်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကစားသမား၏စာရင်းအပြောင်းအလဲအတွက်မည်သည့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆိုအသင်းကကျခံရမည်။
ပွဲများကိုပွဲမစမီ (၂) နာရီအကြာတွင်တင်ရမည်။
ပြီးခဲ့သည့်ပွဲမပြီးဆုံးမီ (အသင်းတစ်သင်း၏အခြေခံသည်ဖျက်ဆီးခံရခြင်း) မတိုင်မီအသင်းသည်နောက်တစ်ပွဲအတွက်အစားထိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒိုင်လူကြီးအားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
၇.၃.၃ မမျှော်လင့်ထားသော / ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအခြေအနေများ
ရုတ်တရက်နာမကျန်းခြင်းကဲ့သို့သောမမျှော်လင့်သောအခြေအနေမျိုး (သို့) အရေးပေါ်အခြေအနေများရှိပါက၊ အဖွဲ့သည်တရားဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေးသင့်သည် (ဥပမာ – ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်စသည်တို့) ။ အခြေအနေကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကစားသမားကိုမာရှယ်မှခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်အစားထိုးနိုင်သည်။ အကယ်၍ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကစားသမား (၄) ယောက်နှင့်အထက်သာရှိလျှင်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည်ပြိုင်ပွဲ၏အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
၇.၄ အဖွဲ့အမည်၊ လိုဂိုနှင့်ကစားသမား၏ IGN
7.4.1 Player ကိုရဲ့ IGN
ကစားသမား၏အမည်များသည်ကစားသမားစာရင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သင့်သည်။ “ Mobile Legends: Bang Bang” (သို့) အခြားအလားတူဇာတ်ကောင်များ (သို့) ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းအရာများရှိသူရဲကောင်းများနှင့်ဆင်တူသောနာမည်ကိုခွင့်မပြုပါ။ Codashop သည်မသင့်လျော်သော IGN ကိုပြောင်းလဲရန်ကစားသမားအားအမိန့်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းကစားသမားသည်သူ၏ IGN ကိုမပြောင်းနိုင်ပါ။ Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးသည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၇.၄.၂ အသင်းများကို Codashop Global Series တစ်လျှောက်လုံးကစားသမားတစ် ဦး ချင်း၏သူရဲကောင်းအမည် (IGN) ရှေ့တွင် (စာလုံး ၄ လုံးပါ ၀ င်သော) အဖွဲ့အမည်များအတွက်အမှတ်အသား ၁ ခုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဤ tags များသည်စာလုံးအကြီး၊ အသေးစာလုံးများသို့မဟုတ် ၀ မှ ၉ အထိသာရှိရမည်။
၇.၄.၃ ကစားသမား၏အမည်များတွင်စာလုံးအကြီးအသေး၊ စာလုံးအသေးများ၊ နံပါတ်များ ဝ-၉၊ ကစားသမားနာမည်သည်အက္ခရာ ၁၂ လုံးထက်မကြီးရပါ။ အကယ်၍ အထူးအက္ခရာများကိုအသုံးပြုပါက Codashop သည်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်ရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကစားသမားနာမည်နှင့်အသင်းနာမည်များတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ MLBB သူရဲကောင်းအနကျအဓိပ်ပါယျသို့မဟုတ်အခြားအလားတူဇာတ်ကောင်အမည်များ; သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖန်တီးစေခြင်းငှါထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆင်းသက်လာ။
၇.၄.၄ အသင်းအမှတ်အသားများ၊ အသင်းအမည်များနှင့်ကစားသမားအမည်များအားလုံးအားကစားရာတွင်အသုံးမပြုမီ Codashop မှအတည်ပြုရမည်။ အချို့ extenuating အောက်မှာမှလွဲ။ အမည်အပြောင်းအလဲများကိုခွင့်ပြုမထားပေ
အခြေအနေများရှိသော်လည်း Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးတွင်အသုံးမပြုမီ Codashop အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအတည်ပြုရမည်။ အသင်းများအားလုံးအားကစားသမားအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းစပွန်ဆာရယူပါကပြင်ဆင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ Codashop မှရှာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီပါကအသင်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လျှင် Codashop သည်အသင်းအမည်ကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
၇.၄.၅ ကစားသမားများ IGN၊ Team Name နှင့် Team Abbreviation မ်ားအားစပွန်ဆာပေးရန်ခွင့်မပြုပါ
ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းအသွင်အပြင် tag ။ အသင်းနာမည်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအားစီးပွားဖြစ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးကို Codashop မှအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
၈.၁ Codashop Global Series တွင်တန်းစီဇယားအပြောင်းအလဲများကိုခွင့်မပြုရ။
အသင်းများအစားထိုးခြင်းမရှိဘဲသာ5ကစားသမား၏အဓိကတန်းစီဇယားမှတ်ပုံတင်ရှိရာဖြစ်ရပ်အတွက်
(က) အဓိကတန်းစီဇယားကစားသမားများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်အသင်းများကို (၆) နေရာအစားထိုးသူကိုသာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရှိသည်Codashop Global Series တွင်မပါ ၀ င်နိုင်ပါ။
၉.၂ Codashop သည်အသင်းတစ်သင်းလုံးတွင်စပွန်ဆာများထည့်သွင်းနိုင်သည်
စပွန်ဆာရယူခြင်းသည်အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း Codashop ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ Sponsor ပေးသူသည်အကန့်အသတ်ရှိသောအမျိုးအစားစာရင်းအောက်တွင်ရှိပါက
ကစားသော အသင်းအဖွဲ့ များအနေဖြင့် Sponsor logo များအား အသုံးပြု ၍မရ နိုင်ပါ။ ကန့်သတ်ထားသောစာရင်းကို Codashop ဘက်မှအချိန်မရွေးပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
(က) လောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုဒ် – ရန်ပုံငွေများကိုလှည့်ဖြားခြင်းအားအထောက်အကူပြုသောသို့မဟုတ်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုသတ်မှတ်သည်
အားကစား / esports ပွဲနှင့် / သို့မဟုတ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်လောင်းကစားရန်ပုံငွေများကိုခွင့်ပြုသည်။
(ဂ) အကောင့်ဝေမျှခြင်း / ရောင်းချခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ။
()) သေနတ်၊ သေနတ်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်ပေးသူ။
(စ) MLBB ၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များမှထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကစားသမားအရည်အချင်းများ၊ Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးအချိန်ဇယားနှင့်အဆင့်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အားအဓိပ္ပ
ါယ်ဖွင့် ဆို၍ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အယူခံဝင်မှုကိုပြစ်ဒဏ်ကြေငြာပြီးသုံးရက်အတွင်း Codashop သို့တင်ပြနိုင်သည်။ အယူခံဝင်မှု၏ရလဒ်ကို Codashop Global Series မှတည်ထောင်ထားသောခုံသမာဓိဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကော်မတီမှဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီးဤကော်မတီမှဆုံးဖြတ်ချက်သည်အပြီးသတ်ဖြစ်မည်။ လျော်ကြေးပေးအပ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
Codashop ဂလိုဘယ်စီးရီးသည်ပြိုင်ပွဲ၏မျှတမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အချိန်မရွေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
10.3 နောက်ဆုံး အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
Mobile Legends ၏တစ်ခုတည်းသောသက်ဆိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် – Bang Bang ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ချုပ်၏စည်းကမ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများသည် Codashop မှဖြစ်ပြီးမပြီးဆုံးသေးသောကိစ္စရပ်များကို Codashop ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်ငည်။​
Previous articleWild Rift ကစားဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလား? ထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝ ရယူလိုက်ဖို့ ဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိအောင်လုပ်လိုက်ပါ။
Next articlePUBG Mobile မှာ Tier Protection က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ?